မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: လက်ကလိခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး...
new experience ပေါ့ ;)
12/04/2008 12:05 AM
သိချင်ရင်ရွာသားလေးသွားမေး. သူကပိုဆိုးသေးတယ်။ ၀ hti ဖြစ်သွားတယ်။
Link မရှိရင် အစ်မဆီကလာယူ. အများကြီးရှိတယ်။
အယ်ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ အစတုန်းက ဘာလို့တန်းပလိတ်ကို ဒေါင်းလော့မလုပ်ထားတာလဲ။ မခက်ပါဘူး။ အသစ်လုပ်လိုက်:)
မခင်ဦးမေရေ.. ကျေးဇူး... အဲဒိလင့်ခ့်တွေ တစ်ခုခြင်းပြန်လုပ်ရတော့မှာမို့ စိတ်ညစ်နေတာ.. ရွာသားလေးဆီဗုံးသွားပြီး အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်..
ဟန်လင်းထွန်းရေ.. အသစ်လုပ်လိုက်လို့ ရမှန်းတော့ သိတယ်.. ဒါပေမဲ့ နှမြောတာက counter လေး reset ပြန်ဖြစ်ပြီး ခုမှ ၆၀ ကျော်ပဲ ရှိသေးတာကို ပြောတာ.. အဟင့်....
ခဏခဏ ပြင်လို့အဲ့လိုဖြစ်ကော တော်သေးတယ် ကျနော့်မှာက ပြင်ပေးမယ့်သူရှိလို့ နောက်ဆုံးတော့ ဒီတိုင်းလေးရေးလို့ရရင်တော်ပြီး ထားလိုက်တော့တယ် မဗေဒါက လှတာ မက်တာကိုးး ခုတော့ ညစာ ခက်ပြီးး :P
၂ ခု တွဲသုံးပါလား။ Statcounter သုံးပြီး Preset Value ကို ၇၀၀၀ ကျော် ထားလိုက်ပေါ့။
12/05/2008 1:49 AM
အဟီး စိတ်ပျက်နဲ့။ များများကလိရင် များများတတ်သွားမယ်။ လူလား။ နံပါတ်က အရေးမကြီးပါဘူး၊ ပရိတ်သတ်ရှိပြီးသားဘဲဟာ လာကြမှာပါ။ ရေးနေဖို့သာ အဓိက။ ဆက်ချီတက်
12/05/2008 8:04 PM
လောလောဆယ်တော့ နာ့လင့် ပျောက်သွားပီ ချိတော့ဝူး :P
12/09/2008 7:48 PM